Loharano - Casting Minghe
Raha manana fanontaniana fanampiny ianao dia jereo ny FAQ fahazoan-dàlana anay; Raha tsy mamaly azy ireo izany dia azonao atao ny mifanerasera amin'ny ekipanay mivarotra. Mitadiava valiny mahafa-po amin'ny famoahana die, famokarana cnc, toy ny orinasa casting casting china.
Ny ankolafy tsirairay avy dia manome alalana ary maneho fa ity fifanarahana ity dia nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny hetsika orinasa rehetra nilaina ary ity fifanarahana ity dia notanterahin'asa ary nametrahana fifanarahana mandaitra sy mamatotra an'io antoko io.
Production Machining dia manompo ny indostrian'ny famokarana miaraka amina fandrakofam-baovao azo itokisana sy ny hevitra momba azy.
Fivarotana Minghe Die Casting manokana amin'ny famokarana betsaka famonoana maty. Ao amin'ny faritra horonan-tsary ao Minghe, ho hitanao ny horonan-tsary farany farany momba ny fanavaozana ara-teknolojia sy ny vaovao manan-danja amin'ireo injeniera mekanika sy mpamokatra.
Hizaha mari-pankasitrahana sy mari-pankasitrahana avy amin'ny Minghe Die Casting Company. Ny traikefa an-taonany maro sy ny serivisy manara-penitra no foto-kevitray lehibe hiasa. Kitiho ny sary fanamarinana hijerena na hisintomana ny kopian'ny mari-pahaizana ISO ankehitriny.
Ny fanariana ny maty dia dingana fanariana vy, izay miavaka amin'ny alàlan'ny faneriterena avo amin'ny vy anidina amin'ny alàlan'ny lavaka famolavolana. Ity dingana ity dia somary mitovy amin'ny famolavolana tsindrona.
Manome vahaolana vahaolana momba ny injeniera maro karazana izahay amin'ny famokarana famoahana maty, ao anatin'izany ny injeniera manara-penitra, ny injeniera metallurgical, ny fifanakalozan-kevitra momba ny vidiny, ny fikajiana ny vidin'ny tsingerina ary ny famakafakana ny sanda. Miaraka amin'ny fanampian'ny matihanina injeniera dia hahazo antoka amin'ny vokatra ambony ianao, izay izahay irery no afaka manome eto. Raha te hifandray amin'ny iray amin'ireo matihanina momba ny injeniera ianao dia mifandraisa aminay amin'ny Internet.
Na dia tena marina aza izany, dia nianatra nandritra ny 35 taona niasa zava-misy isika fa maro ny fahasamihafana lehibe mahatonga ny maotera na ny jiro tarihina tsy mitovy amin'ny telecom, aerospace na elektronika. Ny fianarana ireo fepetra takiana manokana ireo - ary ny famaliana azy ireo amin'ny fomba mahomby - no mahatonga an'i Minghe ho safidy amin'ny famoahana maty maty amina karazana saha manokana.
Minghe dia mpamokatra serivisy manerantany manerantany ho an'ny vokatra maty marina. Manohana mpiasa efa ho 500, ny campus 50,000 20 metatra toradroa no malaza indrindra, miaraka amin'ireo faritra famokarana izay misy milina famoahana 160T-1600T mihoatra ny 50 mandroso, 3+ CNC ivon-toeran'ny milina, CMM lehibe XNUMX, ary milina hafa marobe, ao anatin'izany ny: x-ray, spectrometers, tester de leak, ary mpanadio ultrasonic.